July 15, 2021 - ApannPyay Media
July 15, 2021 by ApannPyay Media
အဲကွန်းနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွဝယ်ရင် ဒါလေးတွေကို စစ်ပါ မဟုတ်ရင် အိမ်တွင်းသူခိုး တကောင်ရောက်နေသလိုပါပဲ အဲကွန်းနဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်အဲဒါကိုကြည့်ပါ အဲဒါလေးကို Star rating လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါမပါရင် ဘာတံဆိပ်ဖြစ်ဖြစ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုက ကိုယ်တိုင်တိုင်းကြည့်မှကောင်းမကောင်းသိရမှာပါ။ ပုံမှန်ကတော့1-Star ကနေ 5-Star ထိရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် Rating သတ်မှတ်ချက်တော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းကဆို ယိုးဒယားနဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွေရဲ့ Rating ကအစစ်အမှန်ရထားတာဆိုရင် တကယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ 5-star အဆင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက စွမ်းအင်သုံးစွဲအရမ်းသက်သာပါတယ်။ အိမ်သုံးအဲကွန်းမှာတော့Start rating မြင့်ရင်မြင့်သလိုဝယ်ရင်းဈေးတော့ Rating နိမ့်တဲ့စက်တွေစာရင် ၂၅% လောက်ပိုကောင်းပိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်် တနှစ်မကြာခင်မှာပဲ မီတာခသက်သာသွားလို့ နောက်နှစ်တွေမှာ တနှစ်ကိုမီတာခ သိန်းကျော်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ Star rating မပါပဲမီတခသက်သာတဲ့ အဲကွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့်နားလည်မှသိနိုင်မှာပါ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တိုင်းCOP , EER ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးကြည့်ပါCOP-3.5 … Read more
ထိပ်ပြောင်သူအတွက် ၂ ပတ်အတွင်း ဆံပင်ပေါက်နည်း
ထိပ်ပြောင်သူအတွက် ၂ ပတ်အတွင်း ဆံပင်ပေါက်နည်း ထိပ်ပြောင်သူ၊ ဆံပင် ကျွတ်လွယ်သူ၊ ဆံပင် ပါးသူများအတွက် အလွန် ထိရောက်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ နည်းတခု ဖြစ်ပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူ ၃ – ၄ တက်လောက် ယူပြီး အခွံခွာပြီး အလယ်က ထက်ခြမ်း ခြမ်းပါ ပြီးရင် ခြမ်းထားတဲ့ အပိုင်းကို ဦးရေပြား ဆံပင်ပါးတဲ့ နေရာတွေ လိုက်ပွတ်ပါ နာရီဝက်ခန့် ထားပြီး အုန်းဆီကို လက်နဲ့ လိမ်းပေးရမယ် အာနိသင်ကောင်းဖို့ vitamin E oil ၅ စက်လောက် ထည့်သင့်တယ် အုန်းဆီ လိမ်းတဲ့အခါ ဆံသား အခြေကနေ အဖျားသို့ နှံ့အောင် လိမ်းပေးရမယ် (ပုံမှန်အားဖြင့် ခေါင်းပြန်လျှော်ဖို့ မလိုပါ။ အနံ့ မခံနိုင်ရင်တော့ … Read more
သား ရှင်ပြုပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအားလုံးကို ကိုဗစ်ကာလမှာ ရွာသားတွေအတွက် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦး
သား ရှင်ပြုပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအားလုံးကို ကိုဗစ်ကာလမှာ ရွာသားတွေအတွက် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦး “ သား ရှင်ပြုပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အားလုံးကို ကိုဗစ်ကာလမှာ ရွာသားတွေအတွက် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ဖခင် တစ်ဦး ”သားအတွက် ရှင်ပြုဖို့ ရည်စူးထားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးကို ကိုဗစ် ကာလအတွင်း အကြပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရွာသားများကို တစ်အိမ်ထောင်ဆန်(၁၀)ပြည်၊ ဆီ(၅၀)ကျပ်သား လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။အလှူရှင်များကတော့ မုံရွာမြို့နယ် ကြေးမုံကျေးရွာမှ ဦးကျော်မင်း + ဒေါ်တိုက်ကြည် တို့၏သား ဒေါက်တာမင်းမင်းစံ + မဆွိဆွိ တို့ မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၄၈၀) ကို နံနက် (၈) နာရီကနေ စတင်လှုဒါန်းခဲ့ပြီး ရွားသားများကို စနစ်တကျ တစ်ဦးချင်းစီ လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ … Read more
“ကျွန်တော်/ကျွန်မ အနံ့ပျောက်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ” ဆိုတာ အမေးအများဆုံးမို့ အနံ့ပျောက်နေရင် ဒါလေးဖတ်ပေးပါ။
“ကျွန်တော်/ကျွန်မ အနံ့ပျောက်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ” ဆိုတာ အမေးအများဆုံးမို့ အနံ့ပျောက်နေရင် ဒါလေးဖတ်ပေးပါ။ အခုကာလမှာ အနံ့ပျောက်ရင် ကိုဗစ် ဖြစ်ဖို့ chance အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် အနံ့လျော့ရတာ ဖြစ်နိုင်သလို လုံးဝပျောက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနံ့ပျောက်ရင် အရမ်းစိုးရိမ်ဖို့ မလိုပါ။ ရောဂါသဘာဝအရ နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းက အနံ့ခံ အာရုံ​ကြောလေးတွေ ယောင်လို့ အနံ့ပျောက်တာပါ။ ရက်ပိုင်းအတွင်း မှာ သူ့အလိုလို ပြန်ရပါတယ်တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကြာချိန် ကွာနိုင်ပါတယ်။အနံ့ပျောက်ပြီဆိုရင် အိမ်မှာပဲ ၂ ပတ် နေပေးပါ။ အနံ့ပျောက်လို့ အစာစားရတာစားမကောင်းဖြစ်စေတာက လွဲလို့ အရမ်းစိတ်ပူစရာ မလ်ိုပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် အစာ ပုံမှန်ဝင်အောင် စားပေးပါ။အနံ့ခံအာရုံကြောတွေကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လိုရင်တော့ နှင်းဆီပန်း/သံပုရာသီး/လေးညှင်းနံ့ စသည်တို့ကိုတစ်နေ့ ၂ ကြိမ် စက္ကန့် … Read more
အဲ့လိုနေတတ်လာအောင် ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲ သင်ပေးခဲ့တာပါ ကိုယ်မျက်ရည်တွေကျတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဖြေမရှာပဲ အပြစ်ဖို့တတ်တဲ့ လူရှေ့မှာ … ကျွန်မ မငိုဖြစ်တော့တာ ကျွန်မ မမှားဘူးထင်တယ် ။ ကိုယ်အလေးထားတဲ့သူကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကို နားမလည်နိုင်တဲ့အခါ ကျွန်မမှာ ပိုပြီး နာကျင်ရတယ်လေ ။ လိုအပ်နေတဲ့အခါတဲ့ … မဟုတ်ဘူး ကိုယ်လွမ်းနေတဲ့အခါ အနားနားမရှိနိုင်ရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ အသံလေး ကြားချင်တာတွေကိုတော့ နားလည်ပါ ။ ဒါပေမယ့် လူကြီးမင်းနဲ့ အမြဲတိုးနေတဲ့ဖုန်းကို မခေါ်ဖြစ်တော့ဘူး။ စာတစ်ကြောင်းပို့လို့မှ … မပြန်လာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ အရေးမပါမှန်းတဖြေးဖြေးသိလာလို့ … စကားတွေပြောချင်နေတဲ့စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ပြီး စာတွေပို့ချင်နေတဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်တာပါ ။ တကယ်ဆို … နဲနဲလေးဂရုစိုက်ပေးခဲ့ရင် တစ်ယောက်တည်းနေနိုင်ခဲ့မယ့် မိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူး ။ သူမှသူဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ နဲနဲလေးသာ ဂရုစိုက်ခဲ့ရင်ပေါ့ … Read more
အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် . .နှုတ်ခမ်းတွေ ပြာပြီး အဆုတ်ကွဲသေတဲ့လူတွေ တော်တော် တွေ့ရတယ်
အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် . .နှုတ်ခမ်းတွေ ပြာပြီး အဆုတ်ကွဲသေတဲ့လူတွေ တော်တော် တွေ့ရတယ် အရေးကြီးတာ တခုပြောမလို့ ၊ မနေ့က ရေဝေးနှင့် ဆရာဝန်တွေဆီကကြားတာ နှုတ်ခမ်းတွေ ပြာပြီး အဆုတ်ကွဲသေတဲ့လူတွေ တော်တော် တွေ့ရတယ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူနာပြုလိုမျိုး နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ၊ oxygen ကို မိသားစုက စွပ်ပေးတော့ အသက်ရှူ ကြပ်တယ်ဆိုတိုင်း ဘားအဆုံး ဖွင့်ပြီး တပ်လို့ သေကုန်တာ တွေလည်း ပါနေလို့ ဘားကို လိုသလောက်ချိန်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ် ၊ အဆုံးထိ ရှူခိုင်းရင် မတော်တဆ အဆုတ်ကွဲ သေတတ်တယ် ဆိုတာလေးကိုတော့ များများသိအောင် ပြောပေးကြပါ ခင်ဗျာ 🙏 ThanKyawOo အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္ . .ႏႈတ္ခမ္းေတြ ျပာၿပီး … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့ မိန်းကလေးတွေ လိုချင်တာ ငွေကြေးချမ်းသာမှု မဟုတ်ပါ ဘူး … ။ သူတို့ဘဝကို နားလည်ပေးနိုင်သူရယ် လုံခြုံမှု ပေးနိုင်သူရယ်ပါ မိန်းကလေး ဆိုတာ အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တတ်သူတွေပါ … ။ အဆင်မပြေချိန် စိတ်အားငယ်ရချိန်တွေမှာ သူတို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာ သူတို့ ငိုကြွေးချင်တာ ချစ်သူ ရင်ခွင်မှာပါ … ။ ဒါပေမယ့် ယောကျ်ားလေး အများစုက ချစ်တယ်လို့ ပြောပြီးရင် ပြီးသွားပြီ တော်ရုံ ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး စိတ်မရှည်တတ်ကြဘူး မအားဘူး ဆိုတဲ့ စကားက သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါပဲ … ။ ဂရုစိုက်မှု မရှိရင် အချစ်က အလကားပဲလေ ချစ်တယ်ပြောပြီး … Read more
သိမ်းထားသင့်တဲ့ တစ်သက်လုံး အသုံး ဝင်မယ့် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးနည်းများ ချောင်းဆိုးလျှင်…ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊နံနက်တွင်းထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ ။ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ..ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှအသာအယာသပ်ချပါ ။ နှာပိတ်သော် ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ ။တက်လျှင်ဆင်ငို မြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည် ။ ရေငတ်ဝမ်းကျ .ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်းကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ ။ကင်းထိုးသော် ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ။ ကြို့ထိုးလျှင်ကြက်သွန်းနီကိုထန်းလျှက်နှင့်နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား ။ခရုသင်း…ကျည်းသီးဆန်ကိုဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာစားရပါသည် ။ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လျှင်ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပျောက်၏ ။ခါးနာ ခါးကိုက်……ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည်လိမ်းပေးပါ ။ ငှက်ဖျားထလျှင် မြင်းခွာရွက်ရည်ကို ငရုပ်ကောင်းနှင့်အမျှစီကြိတ်၍ သောက်ပါ ။ခံတွင်းပျက်လျှင်ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပေးပါ ။ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်လျှင်ကျည်းသီးဆန်ကိုဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့်သွေးလိမ်းပေးပါ ။စကားထစ်လျှင်.နံနက်တိုင်းမြင်းခွာရွက် တစ်ရွက်နှစ်ရွက်လောက် … Read more
အိမ်မှာအထိအခိုက်တခုခု မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်မိတိုင်း ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် မိသားစုမှာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ဖြစ်တယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး၊ စီးပွားရေးကျတယ်၊ လင်မယား ရန်ဖြစ်တယ်၊ သားသမီးတွေ ဆုံးမရတာ မလွယ်ဘူး၊ အိမ်မှာ ရွတ်လို့မရဘူး အိမ်စောင့်နတ် မခံနိုင်ဘူး၊ ဘုရားမှာရွတ်တယ်၊ အသံတွေကြားရတယ်၊ အရိပ်တွေမြင်ရတယ်၊ ပြီးအောင်ရွတ်လို့မရဘူး အနှောက်အယှက်တွေများတယ်၊ စသည်ဖြင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် အဆင်မပြေသူများအတွက် ဒီနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နတ်ပင့်ရပါမယ်။ သမန္တာ စက္ကဝါဠေသု၊ အတြာဂစ္ဆန္တု ဒေဝတာ။ သဒ္ဓမ္မံ မုနိရာဇဿ၊ သုဏန္တု သဂ္ဂမောက္ခဒံ။(ဓမ္မဿဝနကာလော အယံ ဘဒန္တာ။) ၃ခေါက် ဒုတိယက မေတ္တာသုတ် ရွတ်ရပါမယ်။ တတိယက ခွင့်တောင်းရပါမယ်။ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ ဂုဏ်တော်အနန္တ၊ ကံတော်အနန္တ၊ ဉာဏ်တော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တ၊ ပါရမီတော် အနန္တ၊ … Read more
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ PPE ဝတ်စုံနဲ့ သူရဲကောင်း
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ PPE ဝတ်စုံနဲ့ သူရဲကောင်း PPE ဝတ်စုံနဲ့ သူဒီလို PPE ဝတ်စုံနဲ့ ဆိုတော့သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူးသူတာဝန်ပြီးဆုံးသွားလို့ အပြင်ထွက်လာတယ်ပထမဆုံး မျက်နှာအကာကွယ်တွေကိုဖယ်ခွါလိုက်တယ်ခေါင်းတုံးဆံပင်နဲ့ အော်…သူပရဟိတလုပ်နေချိန်ပြည်သူ့အတွက်ကူညီပေးနေချိန်အလွတ်လပ်ဆုံးဖြစ်အောင် သူ့ဆံပင်ကို တိုတိုညှပ်ထားတာပဲပေါ့နောက်တစ်ဆင့်သူ PPE ဝတ်စုံကို ခန္ဓာကိုယ်မှဖယ္ခြါဖို့ စတင်လိုက်တယ်ဟာ……. အမှတ်တမယ့် နှုတ်က ထွက်ပေါ်လာတဲအာမေဒိတ်အသံနဲ့အတူမျက်ဝန်းအစုံမှာမြင်တွေ့လိုက်တာကဘုရားသားတော်ရဟန်းတပါးသံဃာဆိုသည်မှာဒါယိကာ ဒါယိကာမတို့၏ချမ်းသာခြင်းကိုသာလိုလားကြကုန်၏။ မြတ်သော ကုသိုလ်အျမတ်ဆုံးစိတ္ထားအမြင့်မြတ်ဆုံး စေတနာတွေပါကိုဗစ် ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးတွင် ပါဝင်ကူညီနေသည့် သံဃာတော်တပါး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံခါး မြို့နယ်မြို့ချောင်းမြို့ရှိဒညင်းကုန်းကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတော်တပါး Photo ; crd လောကီ လောကုတ္တရာ အတွက်အရှင်ဘုရားတို့ကျေးဇူးထူးကဲလှပါတယ်ဘုရား သံဃဂုဏော အနန္တော ပါ အရှင်ဘုရား တို့ Crd အြန္လုိင္းေပၚမွာ လူေျပာမ်ားေနတဲ့ PPE ဝတ္စံုနဲ႔ သူရဲေကာင္း PPE … Read more